Pfungwa Dzinamato Dzemagumo Kuzadzikiswa | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Pfungwa dzemunamato Kunamata Points Yekupedzisira Zadziko
Kunamata Points Yekupedzisira Zadziko
Nhasi tichange tichitarisana neminamato mapoinzi ezvekuzadzikiswa. Imwe nyanzvi yakambopokana kuti yadhi yeguva ndiyo nzvimbo yepamusoro-soro pasi pano. Nekuda kwekuda kuziva, vanhu vakatanga kusahadzika chirevo ichi. Nyanzvi yakazoenderera mberi ichiti vanhu vazhinji vanofa vasina kuzadzikisa zvavanovavarira uye vanozvidzorera pasi, ndosaka nzvimbo yemakuva iri nzvimbo yepamusoro-soro pasi pano.
Kazhinji, isu takanzwa hukuru huporofita nezve hupenyu hwedu kuti tiri vanhu vakuru, isu tichava vapfumi, isu tichava nemukurumbira. Asi kazhinji kazhinji zhinji dzezvipikirwa hadzimboone kupenya kwezuva. Chiyero chinofa vanhu mazuva ano vasina kusvika pane zvavanogona kana kuzadzisa magumo avo chinonzwisisika. Izvi hazvigone kubviswa pachokwadi chekuti dhiabhori anogara achishanda, achihwandira achitarisa tarisiro dzekuparadza.
Ngatitorei hupenyu hwaSamson semuenzaniso wenyaya. Mwari akavimbisa kuti iye achave murume mukuru, kununura vanhu vaMwari vega, Isreal. Zvisinei, muvengi akamubata asati anyatsozadzisa ramangwana rake. Ndiko kusaka tichifanira kunamata.
Tisati tapinda muminamato, isu tinoda kuratidza zvimwe zvezvinhu zvinogona kubatsira vanhu kuzadzisa magumo.
Nyore Matanho Ekufananidzira Kuzadzikiswa
Teerera Mirayiro yaMwari
Chimwe chezvikonzero nei maringe asina kuzadzikiswa nekuti mugumo anotakura anozvidza kuraira kwaMwari. Kune ese vimbiso kubva kuna Mwari pane chirevo. Rangarira hupenyu hwaMambo Soromoni. Akapihwa njere kubva kuna Mwari. Zvakare rairo dzakateverwa. Imwe yemirairo ndeyekuti haafanire kuroora achibva kune imwe nyika.
Solomon muhungwaru hwake akaroora mukadzi anobva kunyika yevaFiristia kwaakange ayambirwa kuti asatore mukadzi kubva, kumagumo kwake kwakava njodzi huru. Zvakare, hupenyu hwaMambo Sauro muenzaniso chaiwo. Akatadza kuteerera mirairo yakapihwa neMuporofita Samuel uye yakaratidza kupera kwekutonga kwake saMambo.
Chivi ndechimwe chinhu chikuru chinogona kutadzisa kuzadzikiswa kwezvakaitika. Chinyorwa chakacherekedza kuti kumeso kwaIshe kwakarurama kwazvo kuona zvivi. Zano rekutanga raMwari rehupenyu hwaAdamu nderekuti akunde pasi uye ave nekusingaperi koinonia naMwari.
Izvi zvinotsanangura chikonzero nei Mwari achiuya pasi munguva inotonhorera yemanheru kuzotaura naAdamu. Zvakadaro hazvo, zvivi pazvakauya muhupenyu hwaAdamu, mweya waIshe wakabva kure naAdamu uye magumo ake akakanganiswa paartari yechivi. Gara kure nechivi, uye iwe uri nhanho padyo nekuzadzisa rako ramangwana.
Zvikanganiso zvinoitwa nevatendi vazhinji ndezvekuti kana vachinge vawana chivimbiso chehupenyu hwakajeka kubva kuna Mwari, vanodzokera kunorara vachifunga kuti zvinhu zvinobva zvangoerekana zvawira munzvimbo kubva zvakavimbiswa naMwari.
Kukanganwa muvanhu kwakakwirira zvekuti murume haatomboyeuke kuti kune chiporofita chinofanira kuzadzikiswa. Hakushamisi kuti Mwari akaudza Muporofita Habhakuki 2: 2 Zvino Jehovha akandipindura, akati, Nyora zvawaratidzwa, zvionekwe pamabwendefa, kuti amhanye achiiverenga. Mwari vanonzwisisa kuti vanhu vanokanganwa uye ndosaka vakaraira muporofita Habhakuki kuti anyore pasi chiratidzo chekuti uyo anoverenga achamhanya nacho.
Kune nzvimbo yezaruriro, kune zvakare nzvimbo yekumhanyira kune zvinozadzisa izvo zvakange zvaziviswa. Izvo hazvina kukwana kuti titore zvakazarurwa, zviratidzo kana zviporofita, panofanirwa kuve neano sundira mukubudirira.
Rugwaro runoti nzira inoita sedzakanaka pamberi pevanhu uye magumo kuparadzwa. Tinofanira kunzwisisa kuti Mwari vanoziva zvirinani kupfuura munhu. Pane dzimwe nguva dzekuti isu tichazopihwa mirairo iyo yaiita kunge benzi, tinofanira kuedza kuteerera nekuvimba munaIshe.
Mwari ndiye musiki, Anotiziva zvirinani kupfuura chero ani, Iye anoziva zvakaiswa matiri tichiita nzvimbo yekugadzira uye Iye ega ndiye anoziva chaizvo zvekuita kuburitsa izvo zvinogona. Saka kana Mwari achiraira kuti tiite chimwe chinhu, tinofanira kunge takagadzirira kuvimba nekuteerera.
Gara Uchidana Kuti Ubatsirwe
Bhuku raMarko 4 vs 34-40 rinorondedzera kuti Jesu Kirisito aive akarara sei muchikepe vadzidzi vake pavakuda kufa mudutu. Kusvikira vashevedzera kubatsirwa, muponesi ainakidzwa nehope dzake. Zvakare murwendo rwedu kuzadzisa magumo, tinofanirwa kuziva nguva yekuchemera rubatsiro.
Kana zvinhu zvisiri kushanda nenzira yazvinofanira isu tinofanira kuchema kuna Mwari kuti tibatsirwe.
Baba Tenzi, ndinokukudzai kweimwe nguva yakaita seiyi. Ndinokutendai nechipo chehupenyu chamakandipa kuti ndione zuva idzva, zita renyu ngarikudzwe muzita raJesu
Ishe Mwari, ndinonamata kuti nyasha dzizadzise magumo. Chero chiporofita chawataura kuburikidza nemuporofita wako uye neavo iwe wawakandivimbisa kuburikidza nerugwaro, ndinotema kuti anozadziswa muzita raJesu.
Ini ndinopesana nemasimba ese ezvinogumira. Simba rega rega rinotadzisa vanhu kusvika pane zvavanogona, simba rakadai rinoparadzwa muzita raJesu.
Ndinoraira netsitsi dzeWekumusoro-soro, mhuka dzese dzasatani dzatumwa kuti dzindivhiringidze mukoridho yebudiriro, ndibate moto muzita raJesu.
Ini ndinouya kuzopesana nemasimba ese anononoka kuzadzikiswa kwekupedzisira, masimba akadaro anoitwa zvisina basa pamusoro pehupenyu hwangu muzita raJesu.
Kubva ikozvino, ini ndinozivisa kuti ini handimisike muzita raJesu.
Museve wese wakapfurwa kuti unditsause kubva pakubudirira, ndinoparadza miseve yakadaro muzita raJesu.
Ndinonamata kuti nyasha dziuye kuzere simba muhupenyu muzita raJesu. Nyasha dzekufukura hunyanzvi hwangu, nyasha dzekufumura kugona kwangu dzinoburitswa muzita raJesu.
Ndinonamatira simba rekuziva chinangwa changu. Nyasha dzekutsvaga chinangwa dzakaburitswa muzita raJesu.
Kunamata kunongedzera kugumo
Previous nyayaKunamata Points YeBhizinesi Kubudirira
inoteveraKunamata Kunongedzera Kune Vanoparadza Vanoparadza
90 Pfungwa dzeMunamato Kupesana Nemagirini Mukuda Kwako
Chii chinorehwa neIyo munamato weJabez
60 Zuva Nezuva Mangwanani Munamato Usati Waita